Music Qadiimiga laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah noocyada farshaxanka horeeya shukaansiga music dib ugu Musefeni. Music Qadiimiga ah waxaa la abuuray oo ka yimid muddo music muusikada ugu horaysa laga bilaabo eras Qarniyadii iyo Renaissance ka dibna xilliyada wax caadi ah iyagoo eras baroque ah, classical iyo jaceyl. music Qadiimiga ah ayaa la aasaasay noocyo badan oo cusub oo muusiko ah ayaa maanta oo saaray waddada u badan Hababka kale oo muusiko ah. Music Qadiimiga ah ay weli ku jirto mid ka mid ah qaybaha ugu caansan music maanta. Halkan waxa ku jira 10ka composers classical Culaysyadoodii la jira music sida ay eras ay.
Qaybta 1.Baroque Era Composers
Qaybta 2.Classical Era Composers
Qaybta 3.Romantic Era Composers
Xilligii baroque bilaabay qiyaastii in hore ee 1600 oo iska tegey ilaa qiyaastii 1750. In mudadaas music classical ayaa si xoogan bartay iyo tonality la soo bandhigay galay walxuhu badan iyo weliba qodobbada dheeraad ah oo ay gabal kasta. Music Opera ayaa sidoo kale soo bandhigay xilligii Baroque gudahood.
Composers caanka ah ee waayihii waxaa ka mid ah:
Waxaa lagu yaqaanaa halabuurka Concertos Brandenburg ah
Waxaa lagu yaqaanaa Concerto waayo, buunku waa in D ugu waaweyn.
Waxa uu sidoo kale waa laxamiistaha ah si fiican u yaqaan in goobtan. Waxa uu ku qoray Handel Masiixa.
2. Composers Era Qadiimiga ah
Laga soo bilaabo sanadihii la 1750 in ku dhawaad ​​1820 Era Classica bilaabay. Ayado this piano wuxuu noqday qalab Adkaanno inay shuqullo badan oo muusikada. Zaman waxa kale oo tani ay abuuraysaa badan oo ka mid ah habab iyo jaangooyooyin in ay weli yaqaan music classical maanta. Opera ayaa sidoo kale sii waday in uu sii horumariyo in Zaman this.
Composers Era Qadiimiga ah oo caan ku ah in ay music ka mid ah:
Waxa uu si fiican u yaqaan for Symphony No. 40
Waxa uu si fiican u yaqaan for ta u biibiilaha.
Waxa uu si fiican u yaqaan for Concerto u oboe ee E guri Major.
3. Composers Era Romantic
Xilligii Romantic bilaabo qiyaas ahaan agagaarka dabayaaqadii 1800 si ay hore 1900 ayaa si qarnigii 20aad. Ayado this music classical la kordhiyay ka baxsan qaab iyo ka caawiyay inay horyaal qaybaha kale ee muusiga. Zaman waxa kale oo waa marka music bilaabay in ay diiradda saaraan dareenka shucuurta iyo hadal dhex luuq.
Oo caan ku composers Zaman Romantic yihiin:
Waxa uu si fiican u yaqaan for Ballade u Piano ma 1 ee G yar.
Waxa uu si fiican u yaqaan for Hungarian Rhapsody 2aad ee C fiiqan.
Waxa uu si fiican u yaqaan for Radetzky March.
Waxa uu si fiican u yaqaan for Teegeero ee C yar oo af badan.
4. Download music free la TunesGo
Sida loo raaxaysta Apple Watch Music
Play Music on Spotify? Fiiri Tani,
Siyaabaha la isu Download Free Songs Audio
> Resource > Music > Top 10 Composers Qadiimiga ah oo ay caan ku Music